Advento sy Krismasy - Fiangonan'Andriamanitra Soisa manerantany
lahatsoratra > nataon'i Josepf Tkach > Advent sy Noely
Nandritra ny tantara, ny olona dia nampiasa famantarana sy famantarana imbetsaka mba hampita zavatra amin'ny olona mitovy hevitra, fa hanafina izany amin'ny olona any ivelany. Ohatra avy amin'ny 1. Century no tandindon'ny trondro (ichthys) ampiasain'ny Kristianina, izay nanambarany mangingina ny fifandraisany amin'i Kristy. Koa satria maro tamin’izy ireo no nenjehina na novonoina mihitsy aza, dia nanao ny fivoriany tao amin’ny catacombs sy toerana miafina hafa izy ireo. Mba hanamarihana ny lalana mankany dia nasiana marika famantarana trondro teo amin'ny rindrina. Tsy niteraka ahiahy izany satria tsy ny Kristianina no voalohany nampiasa ny famantarana ny trondro - efa nampiasain’ny mpanompo sampy ho famantarana ny andriamaniny sy ny andriamaniny.
Taona maro taorian’ny nanorenan’i Mosesy ny lalàna (anisan’izany ny Sabata), dia nanome famantarana vaovao ho an’ny olombelona rehetra Andriamanitra — dia ny nahaterahan’i Jesosy Zanany tonga nofo. Hoy ny Filazantsaran’i Lioka:
Ary izany no famantarana: ho hitanao ilay zaza voafono lamba ary mandry ao anaty fandriana. Ary niaraka tamin'izay dia nisy anjely maro be any an-danitra izay nidera an'Andriamanitra ka nanao hoe: Voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra, ary fiadanana ho etỳ ambonin'ny tany ho an'izay olona ankasitrahany (Lio. 2,12- iray).
Ny fahaterahan’i Jesosy dia famantarana mahery sy maharitra ho an’ny zava-drehetra izay ahitana ny fisehoan’i Kristy: ny fahatongavany ho nofo, ny fiainany, ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin’ny maty ary ny fiakarany ho amin’ny fanavotana ny olombelona rehetra. Toy ny famantarana rehetra, dia manondro ny lalana; izy io dia manondro ny aoriana (ary mampahatsiahy antsika ny teny fikasana sy ny asan’Andriamanitra tamin’ny lasa) ary mandroso (mba hanehoana izay zavatra hafa hotanterahin’i Jesosy amin’ny alalan’ny Fanahy Masina). Ny fitantaran'i Lioka dia mitohy amin'ny andalan-tsoratra avy amin'ny tantaran'ny filazantsara izay matetika notantaraina taorian'ny Krismasy nandritra ny fetin'ny Epifania:
Ary, indro, nisy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerosalema; ary marina sy marina io lehilahy io ka niandry ny fampiononana ny Isiraely, ary ny Fanahy Masina nomba azy. Ary tonga taminy ny teny avy amin'ny Fanahy Masina fa tsy ho faty izy, raha tsy efa nahita mialoha ny Kristin'ny Tompo. Ary nankany amin'ny tempoly izy noho ny fangatahan'ny Fanahy. Ary rehefa nentin’ny ray aman-dreniny ho ao an-kianjan’ny tempoly i Jesoa Zazakely mba hatao aminy araka ny fanao araka ny lalàna, dia nitrotro Azy izy ka nidera an’Andriamanitra ka nanao hoe: Tompo ô, alefaso amin’ny fiadanana anie ny mpanomponao ankehitriny. hoy; fa ny masoko efa nahita ny Mpamonjy anao, Izay noforoninao teo anatrehan’ ny firenena rehetra, dia fahazavana hahazava ny jentilisa sy hiderana ny Isiraely olonao. Ary gaga ny rainy sy ny reniny izay nolazainy taminy. Ary Simeona nitso-drano azy ka nanao tamin'i Maria reniny hoe: Indro, izany no voatendry ho fahalavoana sy ho fananganana ny maro amin'ny Isiraely ary ho famantarana izay toheriny - ary hotsatohin'ny sabatra ny fanahinao koa - mba ho tonga ny hevitry ny fo maro. miharihary (Lio 2,25- iray).
Amin'ny maha kristianina antsika, ny ankamaroantsika dia tsy miankina amin'ny famantarana sy ny tandindona mba tsy hanafina ny toerana ivoriantsika. Tena fitahiana lehibe ary ny vavaka ataontsika dia miaraka amin'ireo izay tsy maintsy miaina ao anatin'ny toe-javatra mahasosotra. Na inona na inona toe-javatra dia fantatry ny kristiana rehetra fa nitsangana tamin'ny maty i Jesoa ary ny Ray any an-danitra dia mitaona ny olona rehetra ao amin'i Jesosy sy amin'ny alalan'ny Fanahy Masina. Noho izany dia manana fankalazana be izahay - ary tokony hanao izany amin'ny vanim-potoana ho avy sy ny Krismasy ho avy.